Guddiga Gurmadka Qarixii Zoobe Heer Puntland oo Maanta Muqdisho u dhoofay (Dhegayso+Sawiro) – Radio Daljir
Noofember 4, 2017 10:45 b 0
Maanta waxaa kadhoofay Magaaladda Boosaaso ee xarunta Gobalka Bari wafdu isugu jira culumo iyo Wasiiro dowladda Puntland ah ,kuwaas oo u dhoofay Magaaladda Muqdisho ,sido kalena gaarsin doona lacag dhaqaale ah dadkii ku waxyeeloobay qarixii zoobe.
Ugu horeyn Wasiirka Arrimaha Guddaha iyo dowaladda Hoose ee Puntland Tima Cadde oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in isaga iyo wafdiga ay tagi donaan muqdisho ,isla markaana ay wareejin donaan lacag ku dhow (shanboqol oo kun oo dollar).
Gudoomiyaha Gobalka Bari Yuusuf Maxamed wacays dhedo oo goobta ku sugnaa ayaa isna sheegay inay lacagtan tahay mid laga aruuriyeey shacabka Puntland isla markaana la gaarsin doono dadkii ku waxyeeloobay qarixii 14 OCT kadhacay Muqdisho.
Ugu dambayn sheekh Fuaad oo ah Gudoomiyaha Guddiga Culumadda Qarixii zoobe oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in lacagtay siday tahay loo gaarsin doono dadki ku waxyeloobay qaraxaas isla markaana uu u mahadcelinayo cid kasto oo ka qayb qaadatay lacagtan aruurinteeda.
dhegayso codadka dhamaan masuuliyinta goobta ka hadlay